Shina Maty Hiaina ny Zon'ny mpamorona sy ny fampiasam-bola | Galaxy Galaxy
Foto-kevitra: Comedy, Tantara
Daty famoahana: 2018-7-5
Ny fiainan'i Cheng Yong (Xu Zheng) izay tompon'ny Shenoil, dia vaky noho ny fitsidihana tsy nampoiziny. Avy amin'ny mpivarotra vokatra fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny lehilahy izay tsy zakany ny hofan-tranony ho mpandraharaha tokana amin'ny fanafody mahazatra antsoina hoe "Lenin" any India. Nahazo tombony be izy, fiovana lehibe teo amin'ny fiainany, nantsoina hoe " andriamanitra fitsaboana "anaram-bosotra. Saingy, ny ady ady momba ny fanavotana dia niparitaka tsikelikely ihany koa tao anaty fivontosan'ny onja mahery .....
Muye Wen / Requiem (2014),Cities in Love (2015), totalin'ny boxe 6,32 miliara.
Zheng Xu / Very tany Thailand (2012),Very tany Hong Kong (2015),The Island (2018), totalin'ny boxe 2,54 miliara
Zhuo Tan / Abirao totalin'ny boaty 6.81 billion.
Betsaka ny sarimihetsika momba ny olana eo amin'ny andrim-panjakana sy ny olana misy, ary misy ny tena tsara tsy voarindra amin'ny ambaratonga samihafa. Matetika ny sarimihetsika miady amin'ny Japoney dia feno sary tsy misy fanjarian-tsakafo amin'ny tantara an-tsehatra sy tantara an-tsehatra miady am-po. paikady, ary tantaram-pitiavana ra-alika an'ny tompon'andraikitra ambony loatra. Dying To Survive dia horonan-tsary izay manapaka lalina ny hozatra tsizarizary.
Xu Zheng izay naka sary ny fizaran-taona lohataona kisoa mamaky valo, taorian'ny andiany fahitalavitra, dia voalaza fa tsy mikasika velively amin'ny fandefasana tantara an-tsehatra, ny ankamaroany dia mifantoka amin'ny asan'ny sarimihetsika. Izy dia iray amin'ireo tetezamita nahomby indrindra avy amin'ny mpilalao ka hatramin'ny talen'ny faritra amin'ny sarimihetsika .Inoana fa ny Dying to Survive no asa nahomby indrindra notifirin'i Xu Zheng taorian'ny andiany "Very" ,, Tsy maintsy mahaliana tokoa izany.
Ny sarimihetsika dia mifototra amin'ny olona sy zavatra tena izy, saingy vita tantara an-tsehatra tanteraka izany, ary ny valiny haingana dia an'io dia ny mpilalao arcs tena lehibe: ny arcs mpilalao dia feno ary Mamirapiratra amin'ny olombelona. tombontsoa feno fitiavan-tena ho an'ny olona iray izay manampy ny hafa amin'ny fandaniany ny tombotsoany manokana ary mamita ny làlan'ny fanavotana tena. Ny fisalasalana, ny safidy ary ny fanovana rehetra ataony amin'ny sarimihetsika dia maharesy lahatra.
"Dying to Survive" dia sarimihetsika misy dikany ara-tsosialy, mamela ny mpijery hanana fahatakarana lalina ny mararin'ny leukemia sy ny toe-piainan'ny fiarahamonina leukemia.Raha afaka mamono sy manimba fianakaviana ny homamiadana dia misy lanjany ny fanaovana sarimihetsika momba izany.
Fotoana famoahana: 2018-7-5
Vola famokarana ￥ 300,000,000.00
Tahan'ny famindrana ￥ 300,000,000.00
Box office 100 3.100,000,000.00
Fampiasam-bola Mini ￥ 500,000.00
Teo aloha: Avengers Endgame
Manaraka: Ry oloko, tanindrazako